सुजन बराईलीले ल्याए समय सान्दर्भिक मर्मश्पर्शी गीत “शोकले मरिन्छ की भोकले” -
मन बहादुर पुन १९ जेष्ठ २०७८, बुधबार १७:२७ 559 पटक हेरिएको
काठमाडौं । पत्रकार,सर्जक, निर्देशक एबं गीतकार प्रकाश बराईली अभिब्यक्तिको शब्दमा गायक सुजन बराईलीको कोरोना बिशेष गीत “शोकले मरिन्छ की भोकले” भिडियो सहित सार्वजनिक भएको छ ।
पछिल्लो समय दोस्रो भेरियन्टका कारण बिश्व आक्रान्त भईरहेको अवस्था छ । कोरोना कै कारण धेरै नेपालीहरुको ज्यान गएको छ । कतिपय नेपालीहरु कोरोना सँग लडिरहेका छन् । कतिपय संक्रमितहरु अस्पतालमा जाँदा बेड नपाएको संक्रमित बिरामीहरुको गुनासो पनी छ । नेपालमा लकडाउनको बेला अत्यावश्यक काम बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कन नेपाल सरकारले अनुरोध गरेको छ । लकडाउनमा बाहिर निस्कने नियम पालना नगर्नेलाई नेपाल प्रहरी कडा कारबाही पनि गर्ने गरेको थाहा पाईन्छ ।
कतिपय बिरामीहरुले अक्सिजनको अभावमा अकाल्मै ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ । सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै यस गीतमा सर्जक, पत्रकार, निर्देशक एबं गीतकार प्रकाश बराईली अभिब्यक्तिको शब्द, सुजन बराईलीको स्वर रहेको छ भने चर्चित गायक तथा संगीतकार रमेश बिक्रम रत्नको संगीत रहेको छ ।
“शोकले मरिन्छ की भोकले” गीतलाई पछिल्लो समयका चर्चित एरेञ्जर रमेश सेञ्चुरीले एरेञ्ज र मिक्सिङ गरेका हुन् । पत्रकार एबं गीतकार प्रकाश बराईली अभिब्यक्तिको निर्देशन तथा छायांकन रहेको गीतको भिडियोलाई बिरेन्द्र भाट बिपिन (वल्र्ड कभर मिडिया प्रा.लि.) ले सम्पादन गरेका हुन् ।
“शोकले मरिन्छ की भोकले” गीतको भिडियोमा लोकप्रिय मोडल शिवन पोखरेल र नारायण सारुको अभिनय रहेको छ । सो गीतलाई मल्लाजी म्युजिक प्रा.लि. ले बजार ब्यवस्थापन गरेको छ भने म्याग्देली डिजिटल एण्ड मल्टी मिडिया सेन्टरले दृश्य निर्माण गरेको हो ।
फिल्म भन्दा प्रेमले चर्चामा